DRC: ကြာသပတေးနေ့ 05 စက်တင်ဘာလ 2019 ၏ကင်ရှာဆာစာနယ်ဇင်းပြန်လည်သုံးသပ် - အာဖရိက - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အာဖရိကဖိထားပါ "DRC: ကြာသပတေးနေ့ 05 စက်တင်ဘာလ 2019 ၏ကင်ရှာဆာစာနယ်ဇင်းပြန်လည်သုံးသပ် - အာဖရိက
- ဒါဟာပထမဦးဆုံး IMF ကခရစ္စ Lagarde ၏ဥက္ကဋ္ဌဖဲ Tshisekedi နှင့်သမ္မတအကြားဝါရှင်တန်ရှိမတ်လ 2019 အတွက်အစည်းအဝေးအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ DRC ၌သူ၏မစ်ရှင်ပြီးနောက်တစ် IMF ကအဖွဲ့ကယနေ့နံနက်မီဒီယာတွင်ထင်ဟပ်စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများ, ရန်ချိန်ညှိအကြံပြုထားတဲ့အတွက်5ဇွန်လအစီရင်ခံစာသွားရောက်ခဲ့သည်။
သတင်းအေဂျင်စီက CONGOLAISE IMF ကအဆိုပါ DRC ၏ဘဏ္ဍာတိုက်မှအကြွေးဝင်ငွေပူးတွဲတင်ပြထားများအတွက်ခြေလှမ်းများအကြံပြုကြောင်းတင်ပြထားပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ၏ IMF ကဘုတ်အဖွဲ့၎င်း၏ဌာနချုပ်မှာအစည်းအဝေးကအင်္ဂါနေ့ကအောက်ပါ, ဘဏ္ဍာတိုက်မှအကြွေးဝင်ငွေပူးတွဲတင်ပြထားဖို့ရထားကွန်ဂိုအစိုးရကခြေလှမ်းများအကြံပြုသည် ACP ဒီကြေညာချက်ကို ကိုးကား. ကပြောပါတယ် ယင်း၏ရေးဆွဲရေးအတွက်အဖွဲ့အစည်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့4စက်တင်ဘာလ 2019 နိုင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ACP ၏နေ့စဉ်စာစောင်ဘို့ဤအစီအမံများကင်းလွတ်ခွင့်လျှော့ချနှင့်အခွန်အခြေစိုက်စခန်းတိုးချဲ့, အခွန်စနစ်က simplifying နှင့်အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်နယ်စပ်ထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးတက်အောင်နောက်ထပ်ပေါင်းစည်းမှုများပါဝင်သည် ငွေသားသတ္တုတူးဖော်င်ငွေဖြစ်သည်။
အကြွေးရေရှည်တည်တံ့ရေး, အများပြည်သူအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အေဂျင်စီတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုမှာ IMF ကဒါရိုက်တာများအကုန်အကျချေးငွေနှင့်လုံခြုံချေးငွေများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အများပြည်သူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများထိန်းချုပ်မှုအကြံပြုနှင့်ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်ဖို့မဟာဗျူဟာဖွံ့ဖြိုးဆဲ ပြည်တွင်းကြွေးကျန်။
ရေဒီယို France International DRC က၏ဘဏ္ဍာရေးပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက် IMF ကများ၏ထောက်ခံချက်များနှင့် ပတ်သက်. ကြေငြာချက်။ RFI အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့, အများပြည်သူဘဏ္ဍာရေးခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့အခြေခံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအကောင်အထည်ဖော်ကျယ်ပြန့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်ခြင်းနှင့်အားလုံးပါဝင်နိုင်တိုးတက်မှုနှုန်းမြှင့်တင်ရန်ဤနိုင်ငံရေးအကူးအပြောင်းကိုယူဖို့အတွက် DRC ဟုမေးကပြောပါတယ်။ ဤသည် 2015 ကတည်းက DRC ၏ပထမနှစ်ပတ်လည်ပြန်လည်သုံးသပ်၏ကောက်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။
အဆိုပါ, rue Camille Desmoulins ၏မီဒီယာပြည်နယ်ဖဲ Tshisekedi သစ်ခေါင်း IMF ကမှပြန်လာသောသူ့ကိုတိုင်းပြည်ရှိသူ၏မစ်ရှင်ပြန်လည်စတင်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မိမိအကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲမိန့်ခွန်းမှာဝန်ကြီးချုပ်သူ IMF ကအပါအဝင်ပြင်ပမိတ်ဖက်အပေါ်မှီခိုကြောင်းညွှန်ပြခဲ့သည်။
RFI နှင့်ထည့်၎င်း၏နှစ်ပတ်လည်ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်, IMF ပြီးသားယင်း၏စွမ်းရည်ခိုင်မာစေရန် "ဟုအဆိုပါ DRC နိုင်ငံတကာအလှူရှင်များ၏ထောက်ခံမှုလိုအပ်မယ်လို့" မှတ်ချက်ချသည်။ သို့သော်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကမတိုင်မီထိရောက်သောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တိုင်းပြည်အားပေး။
DESCECO.COM IMF ကဗဟိုဘဏ်စျေးကွက်တည်ငြိမ်ရန်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်သိုက်တိုးမြှင့်ဖို့ကြောင်းအကြံပြုကြောင်းတင်ပြထားပါတယ်။ IMF ကဒါရိုက်တာနိုင်ငံခြားသိုက်၏တိုးစျေးကွက်တည်ငြိမ်ရန်ကွန်ဂိုဗဟိုဘဏ် (BCC) ကို enable မယ်လို့သည်ကို Virtual မီဒီယာကဆိုပါတယ်ကယုံကြည်ကြသည်။
အရ DESCECO.COM "ဒါရိုက်တာသည့်ငွေကြေးမူဝါဒမူဘောင်က၎င်း၏ထိရောက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်မယ်လို့မွမ်းမံရန်သဘောတူခဲ့သည်။ သူတို့ကသင့်သည်အတိုင်း, စျေးကွက်တည်ငြိမ်မှကြားဝင်စွက်ဖက်ရန်၎င်း၏နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်သိုက်တိုးမြှင့်ဖို့ဗဟိုဘဏ်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
Huawei ကကွန်ဂိုအစိုးရမှပံ့ပိုးကူညီမှု pledges သူ၏စိတျအပိုငျးအတှကျသာယာဝပြောတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာ။ အဆိုပါပြည်နယ်၏ဦးခေါင်း, ဖဲ Tshisekedi Tshilombo, ကင်ရှာဆာအတွက်အင်္ဂါနေ့3စက်တင်ဘာလအပေါ် lit, ဒစ်ဂျစ်တယ်-2025 Horizon အစီအစဉ်၏အတညျပွုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏မီးအိမ်။
တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးများ၏အေးဂျင့်အဖြစ်အခြားသင်တန်းသားများအပုဒ်ပေါ် cogitating, Mont-Fleury, ဒစ်ဂျစ်တယ်စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူကြာသပတေးနေ့5စက်တင်ဘာလအစည်းအဝေးအပေါ်အများပြည်သူန်ဆောင်မှုများဦးခေါင်းပိတ်ဖို့ရန်မျှော်လင့်ထားသည့်အရာများ၏လှုပ်ရှားမှု၏နေ့ယုံကြည်ဖို့ တစ်ခုနှင့်သင့်လျော်သောဒစ်ဂျစ်တယ်အစီအစဉ်ရှိသည်ဖို့တိုင်းပြည်ဖွင့်ဖို့ကိုဆိုလိုသည်။
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး, အ Ilunga အချက်ပြမှုများ: ၎င်း၏တစ်ဦးအဖြစ် AS နိုင်ငံရေး, FORUM DES ဟာ၌တည်၏။ နေ့စဉ် Limete အဘို့, Mobutu နှင့် Tshombe ၏အလောင်းများကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့အပေါင်ခံ, လူအပေါင်းတို့သည်၎င်း၏အရင်မှအခွန်ဆက်ပေးဆောင်သစ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတကထောက်ခံအမျိုးသားရေးညီညွတ်မှု၏ယုတ္တိဗေဒ၌တည်ရှိ၏ ။
မနေ့က၏ "ရန်သူများကို" အကြားပူးပေါင်းနှင့်အတူပြောင်း, အမည်ရသည့် UDPS နှင့်ယုတ္တိဗေဒ၏ညွန့်ပေါင်းအတွက် Kabila စခန်းဟာဒီနိုင်ငံရဲ့သား, ဒါကြောင့်အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးပြန်လည်သင့်မြတ်ဖို့အလိုဆန္ဒကနေလာပါတယ်။ တဦးတည်းသာကိုဘယ်လိုဖိုရမ် DES ဟာ AS, ကြိုဆိုနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါပုံတူ Ilunga သောကြာနေ့မည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းကြီးတွေခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်အတွက်သာယာဝပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်။ နေ့စဉ်အဘို့, ကွန်ဂိုကလူသစ်ကိုအစိုးရကိန်းဂဏန်းများကအမှန်တကယ်ကသူတို့အလုပ်ကိုစတင်ကြည့်ဖို့ကောင်းတဲ့အငတ်ပြီပေမယ့်သဘာဝကိုမီးရှို့ဖို့မခြေလှမ်းများရှိပါတယ်။
ထိုကြောင့်ငါတို့သည်နည်းလမ်းကိုသွားနှင့်စာအားလုံးကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအောက်ပါရမည်ဖြစ်သည်။ သူနောက်ဆုံးအင်္ဂါနေ့ကအစိုးရအစီအစဉ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသပြီးနောက်ဝန်ကြီးချုပ် Sylvestre Ilunga, အမျိုးသားညီလာခံတွင်မနက်ဖြန်သောကြာနေ့စက်တင်ဘာလ6ပြန်သွားပါ။
48 နာရီအမှန်ပင်အရာကိုအဖြစ်လူအများ၏ကိုယ်စားလှယ်များထမြောက်တော်မူမရေမတွက်နိုင်တဲ့အဖြေကိုအမျိုးမျိုးသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်အတူကျေနပ်သဘောတူညီချက်ပြင်ဆင်ထားရန်အလို့ငှာခွင့်ပြုခံခဲ့ရသည်။ ပြီးတာနဲ့အတည်ပြုအစီအစဉ်သည်သူ၏တစျခုလုံးကိုအစိုးရအဖွဲ့သည်အတူကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုကြလိမ့်မည်, နှင့်အလုပ်စတင်, ကြွယ်အကြောင်းကြားခဲ့သည်။
ပြည်နယ်အတွင်းပိုင်းဝန်ကြီးအဖြစ်ကှနျဂိုဗဟိုအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည်သူကို CONGOSYNTHESE.COM ကင်ရှာဆာအတွက်ခေါ်ယူအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ပြည်ထဲရေးများအတွက်ယာယီလက်ထောက်ဝန်ကြီးချုပ် Basil Olongo Atou Matubuana, ထိုပြည်နယ်၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၏ကြားဖြတ်အစိုးရများအတွက်ကှနျဂိုဗဟို၏ပြည်နယ်အတွင်းပိုင်းဝန်ကြီး Marcel Matumpa, designated ။
သူနှင့်မကြာသေးမီကဗဟို Basil Olongo အားဖြင့်ခေါ်ယူနေကင်ရှာဆာကှနျဂိုအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတစ်ဦးလိင်အရှုပ်တော်ပုံမှာပါဝင်ပတ်သက်ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူး, Justin Luemba ။
ဤအစည်းအဝေး၏အတိုင်းအတာဗဟိုကှနျဂိုဘာသာရပ်၏နှစ်ခုအာဏာပိုင်များကိုဖန်ဆင်းသောလိင်အရှုပ်တော်ပုံအပေါ်မည်သည့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမပါဘဲကောင်းသောအကျင့် Cassation ၏တရားရုံးက၎င်း၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမှာအများပြည်သူအစိုးရရှေ့နေခွင့်ပြုပါရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ယူခဲ့ပါတယ်, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပြောပါတယ် စက်တင်ဘာလ4မစ္စတာ Olongo ။